Wararka Dibadda – Page 6 – Shabakadda Amiirnuur
Go’doominta Ay Yahuuddu Ku Heyso Gaza oo Burbur Ku Haysa Dhaqaalaha Falastiin.
Dhibaatooyinka gumeysi ee ay Yahuuddu ku heyso Falastiin waxaa kuwooda ugu waaweyn kamid ah dhaqaale burburinta, taasoo ujeedadeedu tahay in muslimiintaas laga dhigo fuqaro gacmaha hoorsada. Yahuuddu waxay xireen warshado wax soo saar oo ku yaallay Gaza. Mid kamid ah saxafiyiinta halkaa wararka kasoo tabiya oo hor taagan warshad xoog […]
Xiisadda Mareykanka Iyo Iiraan oo Saameyn Ku Yeelatay Dhaqaalaha Adduunka. (Warbixin)
Dilka Taliyihii Ciidamada Qudus ee Iran Qaasim Suleymaani oo lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo uu Mareykanku ka geystay shalay magaalada Baghdad ayaa jah wareer ku keenay suuqyada maaliyadeed iyo saliida ee caalamka. Qiimaha saliidda adduunka ayaa u booday inuu u dhowaado toddobaatan doollar halki foosto. Qiimaha qandaraasyada mustaqbalka […]
Mareykanka oo Ciraaq Ku Dilay Qaasim Suleymaani oo Ka Tirsanaa Saraakiisha Sare Ee Shiicada Iiraan.
Mareykanka ayaa duqeyn uu saaka ka geystay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad, halkaasoo uu ku dilay General Qaasim Suleymaani oo ka tirsanaa saraakiisha ugu sarreysa milatariga Shiicada Iiraan. Iiraan ayaa durbadiisa cambaareysay duqeyntan iyadoo sheegtay iney ka aar gudanayso Mareykanka. Wasiirka Arimaha Dibadda Iran Maxamad Jawaad Dariif […]
Barlamaanka Turkiga oo Ansixiyay In Ciidamo Loo Diro Liibiya.
Khamiistii shalay, baarlamaanka Turkiga wuxuu ku ansaxiyay kalfadhi gaar ah in ciidamo ka socda dalkaas loo diro wadanka Liibiya oo la daalaa dhacaya hagar daamada duullaano kala duwan oo lagu qaaday. Xildhibaanada ogolaaday qorshahan ayaa waxay gaarayaan 325, halka 184 ay kasoo hor jeesteen, wuxuuna gudoonku ku dhawaaqay in si […]
Taliyihii Ciidamada Taiwan oo ku dhintay Burbur Diyaaradeed.
Wararka ka imaanaya Taiwan ayaa sheegaya in shil diyaaradeed oo ka dhacay wadankaas ay ku dhinteen masuuliyiin sar sare oo katirsan maamulka Taiwan oo uu kamid tahay taliyaha guud ee ciidamada. General Shen Yi-ming iyo 7 ruux oo kale, kana mid ah masuuliyiinta Taiwan ayaa la xaqiijiyay geeridooda, kadib markii […]
Khasaaraha Ganacsiga Turkiga Ee Dibadda oo Kordhay. (Warbixin)
Xog rasmi ah oo uu Turkigu bixiyay maalintii shalay ayaa waxay shaacisay kororka hoos u dhaca ganacsiga dalkaas inkastoo ay sannadkii lasoo dhaafay ee 2019 ay badnaayeen wax yaabaha ay dhoofiyaan. Xogta Hay’adda Tirakoobka ee Turkiga waxay muujisay in qiimaha dhoofinta intii lagu jiray Bishii Nofembar ee la soo dhaafay […]
Dadka Reer Ciraaq oo Ka Cabanaya Alaabaha Dibadda Laga Keeno.
Dal walba oo uu shisheeye ku duulay wuxuu dhibbane u yahay in la wiiqo dhaqaalihiisa si toos ah iyo si dadban, ganacsigiisana ay ka faa”iidaan ajaanibta. Dadka reer Ciraaq ayaa dhigaya isku soo baxyo iyo barnaamijyo cabasho ah oo ay ku diidan yihiin badeecada dibadda oo aad u badatay, taa […]
5 Qof ayaa ku Dhimatay Shil Ka Dhacay Dalka Kenya.
Dabaaldegga ciidda Kirismiska ayaa Kenya ugu soo gabagaboobay musiibo iyadoo ay geeriyoodeen shan dhallinyaro ah kadib markii uu gaarigooda uu ku burburay Waddada Eldama Ravine-Torongo ee Gobolka Baringo. Sida uu sheegayo Taliyaha Bilayska gobolkaas, shilka ayaa dhacay 5:30 aroornimo xilli boqollaal dad ah ay isugu soo bexeen fagaare maqaayad horteed […]
Soo Saarka Cunta Uganda oo Hoos U Dhacaya. (Warbixin)
Isbedel ku yimid cimilada dalka Uganda ayaa saameyn ku yeelanaya soo saarka badarka aasaasiga ah sida galleyda, mooska iyo digirta, sida ay sheegtay dowladda wadankaas. Daraasadda, oo ay hogaamineyso Xarunta Caalamiga ah ee (CIAT), ayaa sheegaysa in heerkulka oo kordhaya uu beeraleyda ku qasbi doono iney ka tagaan wax soo […]
Muxuu Xambaarsan Yahay Socdaalkii Afwerki Ee Itoobiya?
Madaxweynaha Ereteriya Asayis Afwerki ayaa booqday Itoobiya laba maalmood ka hor inta uusan ku noqon caasimadda dalkiisa, ee Asmara. Intii ay socotay booqashadiisa, Afwerki wuxuu la kulmay Raiisul Wasaaraha Itoobiya Abiy iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Itoobiya. Dhamaantood waxay u dabaaldegeen aasaaskii safaaradda Ereteriya ee laga dhisi doono […]